Hiran State - News: Boqorka dalkaasi Kuwait iyo madaxweynaha Somaliland oo kulan wada yeeshay.
Boqorka dalkaasi Kuwait iyo madaxweynaha Somaliland oo kulan wada yeeshay.
Markaa ka dib Madaxweynaha Somaliland iyo weftigiisu kulan muddo saacad ah qaatay la yeesheen Hay’adda Kulmisa hay’adaha iyo ururada sama-falka ee wadanka Kuwayt. Waxaanu Madaxweynuhu uga xaal waramay kaalmada uu shacbiga Somaliland uga baahanyahay hay’adahaas sama-falka ee muslinimo iyo benni-aadanimo. Hay’adahaa ayaa iyaguna sheegay in ay diyaar u yihiin gacan ka geeysashada taageerada ay u baahanyihiin shacbiga Somaliland, dhawaana soo diri doonaan koox diraasad ka soo samayn doonta Dalka Somaliland.”
· admin on May 01 2011 21:47:48 · 0 Comments · 3098 Reads ·
14,569,334 unique visits